Kulan Lagu Xoojinayay Hirgalinta Hawlaha Horumarka ee Degmada Garbo. - Cakaara News
Kulan Lagu Xoojinayay Hirgalinta Hawlaha Horumarka ee Degmada Garbo.
Garbo(CN) Axad, 31, January, 2016, Waxaa ka dhacay magaalada Garbo ee xarunta degmada garbo ee gobolka Nogob kulan ay ka soo qaybgaleen qaarka mid ah masuuliyiinta maamulka gobolka Nogob, masuuliyiinta degmada garbo, iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada garbo.
Kulankaasi ayaa waxay ujeedadiisu ahayd mid lagu sii xoojinayo hirgalinta qorshayaasha horumarka iyo saxiloonida guud ahaanba gobolka gaar ahaana degmada garbo. waxaana hogaaminayay kulankaasi hogaanka nabadgalyada gobolka Nogob mudane Guuleed Maxamed Ismaciil, madaxa arimaha siyaasada ee Gobolka Nogob Muuse Maxamed Xusen iyo gudoomiyaha degmada Garbo mudane Cabdi Xasan.
Masuuliyiintan ayaa u soo bandhigay qaybaha kala duwan ee bulshada jihooyinka horumarineed siyaasadeed iyo nabadgalyo ee u dajisan xukuumada DDSI waxayna sheegeen masuuliyiintani in uu shacabku yahay mulkiila yaasha iyo hirgaliyayaasha hawlaha horumarka iyo nabadgalyada. waxayna sharax dheerna ka siiyay kaalinta ay kaga qayb-qaadanayaan.
Dhankooda qaybaha kala duwan ee bulshada ka soo qayb-gashay kulankaa ayaa sheegay in ay sii xoojinayaan hawlaha horumarka iyo nabadglayada waxayna siwayn ugu mahad celiyeen heerarka kala duwan ee xukuumada DDSI dadaalada balaadhan ee ay kor ugu qaadayso qaybaha nolosha bulshada DDSI.